IHLAZO: IINGOMA ZOKUDUMISA UVAVANYO LWEALBHAMU - IINDABA
Kwi-albhamu yabo yokuqala, iqela lase-UK elihlulayo lizahlukanisa noontanga babo, bethoba ingqumbo yabo emva kokufikisa ngobukrelekrele kwaye, okona kubaluleke kakhulu, kukuziqonda ukuba abanakuphumelela.
Dlala iTrek Ikhonkrithi -IintloniUkuhamba Ibhendi / Thenga
NgeCawa emva kwemini, enye yeenkqubo ezindala ze-BBC, Iingoma zokudumisa, igcwalisa amagumbi athile aseBritane ngeekwayala zeengelosi zeenkonzo zeli lizwe. Liziko-lemveli, elixineneyo, kunye yamkelwe ngokwasebukhosini . Inyaniso yokuba i-Shame's LP yabelana ngegama ibonisa intsingiselo ye-quintet yentsini. Iingoma zokudumisa isongela ukuqhwithela kula magumbi ahlonelwayo njengamagusha amnyama angamenywanga, ebeka umbala kwiBritane ekhuselekileyo ngeengoma zepost-punk zokucekiseka. Ukuvela kule ndawo inye yokupapasha yaseMzantsi London eyayihlala i-squat-chic ecekisayo iFat White Family, Ihlazo nalo linetyala lokuwa kunye neQela leSine. Njenge-FWF, banamaqhuqhu ngokwaneleyo ukuba baphinde bavuse izidumbu zookhokho babo.
umculo omtsha we-elektroniki
Kodwa kumlo wabo wokwahlula kubo bonke abanye abamhlophe abamnyama ibhendi yesiginci saseBritane, uShame ubeka ingqumbo yabo emva komntwana ngokufikisa kwaye, okona kubalulekileyo, kukwazi ukuba ngekhe baphumelele. Ukusuka kuthuli oluvaliweyo lokuLinga, umntu ongaphambili uCharlie Steen uzinze kwimbono yokuhlala engaziwa: Iyintoni injongo yokuthetha ukuba onke amazwi akho athethiwe? Uzama ukungabinakuphepheka abagxeki base-Bhritane ukuba babhengeze njengabasindisi bendawo ngokwala ukwakhiwa. Umbono wenkwenkwezi yerock uyacaphukisa, uxelele Umgcini kwi iprofayile eyayifafazwe kwiphepha elingaphambili lephepha.
USteen akonwabanga ngokukhuthaza nabani na ngaphandle kwamaqabane akhe kwaye akafuni lusizi. Ndiyathemba ukuba uyandiva, uyabhonga izihlandlo ezisibhozo kwiKhonkrithi kodwa emva koko azenzele ithayile enye kamva. Ilizwi lam ayisiyiyo le uyivileyo / Kwaye ungakhetha ukuwathiya amazwi am / Kodwa ngaba ndiyanikezela? Ubuza kwi-anthem pop ye-One Rizla. Unika i-fuck, kodwa kuphela malunga nokunganiki fuck. Iintloni azizithathi njengezikhethekileyo okanye ezibalulekileyo. Isandi sabo ayisiyiyo yonke into enomdla, umsindo wabo ayisiyonto intsha. Eyokugqibela, nangona kunjalo, ishushu njengelangatye eliluhlaza. Ikhula ngokuqaqamba njengoko uSteen ephinda amabinzana ombongo kwakhona kwaye ephindaphinda phantse kuwo wonke umkhondo de unyanzelwe ukuba ubhalise ukukhathazeka kwakhe.
Ukuba iintloni zezesizukulwana sokuvuselela iBritish refuseniks ukujongana nemvukelo, Iingoma zokudumisa yingoma yayo, ibetha umlozi njengeketile isiza emathunjini. Ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni, i-motorik yayo ihamba ngendlela ehamba ngendlela yohambo lwamanzi amdaka avela kwiqula elimdaka ukuya kwisitya sangasese esingaphezulu. Ubuchule bukaSteen bemifanekiso engamanyala bumphakamisa ngaphezu koontanga bakhe. Ukwazi ukusikelwa umda kwesini sakhe kunye nohlobo, ulungelelanise i-charisma ekubonisayo ukuba umamele iintsomi zakhe ezithandekayo ezivela kwinto engekhoyo. KwiGolide Hole (inkcazo engacacanga yelungu lobufazi), uxelela ibali elingcolileyo lendoda endala enesifo esithandanayo nentombazana encinci. Ukubila kubala imibimbi / Ulwimi luchukumisa umngxunya, uyagquma, ngokudibanisa isidlele se-Ian Dury kunye nengozi ehlekisayo Begbie ukusuka Uqeqesho . Uziva engcole kakhulu, uyazi ukuba ayilunganga / Kodwa uziva kamnandi eLouis Vuitton. Uphawu lwentengiso aluzange luvakale ngathi alunamdla.
USteen lichule lokudlala. Utshiza ngokulingana neLampoon kunye ne-Tasteless, uyakhala kunye neebhulukhwe ezingenamsebenzi ku-Donk, ubalisa okomntu okruqulayo kwi-standout iLick (cinga i-Blur's Parklife kulutsha oluzelwe emva kwexesha ukuba lukhathalele ukuba i-Vorsprung durch technik yayithetha ntoni), kwaye Ukhala ngesisa kwi-ballad Angie, i-ode kwintombazana eyazibulala. Ngelixa ukhangela umthombo woburhalarhume bakhe, ugqithisa ukuba kukho izele ezingaphezulu kwilogo yakhe kunokuhlangana neliso. Amava ka Shame eminyaka emithathu yokugigitheka aqinise ukuzithemba kwakhe ngelixa ebazisela udumo njengelona themba litsha lixhomis 'amehlo kwisigingci esikhulayo saseLondon. Ukuguqulela oko ukurekhoda akunantsingiselo. Bayenza ngeentsuku ezilishumi. I-taut kodwa ikwangumgxobhozo; zixinekile kwaye zikulungele ukuqhekeka ngokuphelelwa lithemba kwabafana abahlanu abangalawulekiyo.
Neon indian vega intl isikolo sasebusuku
Ngumbuzo wokuba ingaba le machismo ekhohlakeleyo ixabisa nkqu neqhezu lento ibiyiyo, okanye ukuba iyafuneka kwakhona kwi-rock'n'roll. Jonga ngokusondeleyo, nangona kunjalo, kwaye uyakufumana imodeli enqabileyo yendoda ethetha ngokuchasene nobufazi kwaye inayo Umdla omncinci ekuziphatheni okubi . Ndingaqalekiswa yinkampani kodwa ubuncinci ndiza kuthetha / kwaye ulwimi lwam alunakuze ludinwe, woyikisa uSteen kwiLampoon. Ngaba u-2018 ubiza ubundlongondlongo bamadoda amhlophe ngakumbi? Hayi. Kodwa iintloni azikuceli ukuba ubanqule, kuphela ukuba umamele irakethi yabo engengcwele kwaye uzive ucatshukiswa kukungxola okanye ukuxubana. Ndizama ukubakhona / nge-cyst yomzuzwana, iya kwiFriction, ndicinga ukuba xa iqamza eliqulathe ingqumbo ezele ngumsindo kulutsha lwaseBritane luyaqhuma, yonke into izakufumana into embi kakhulu.
kuhle ukuba nguwe
yibambe ngengoma yengoma
I-apiona ye-fiona ilanda i-cutter cutters
leliphi ijelo le-vmas ngokuhlwanje
Ungamenza njani umkhonyovu
Ipinki ye-pink floyd emantla emelika 2017